9 menus dhinaca CSS si aad uhesho boggaaga | Abuurista khadka tooska ah
ka Liistada dhinacyadu waa lagama maarmaan maanta siinta booqdaha ficilada ugu muhiimsan ee u qaadaya qayb kasta oo ka mid ah boggeena. Taasi waa sababta aan kuugu keeneyno taxane ah 9 dhinac ama dhinac CSS menus si aad ugu dhex gasho websaydhkaaga oo aad markaa ugu darto tiro ka kooban khibradaha isticmaalaha adoo adeegsanaya kombuyutarkaaga.
ESA waayo-aragnimada isticmaalaha ayaa muhiim ah Maanta taleefan casri ah ama kiniin ah maxaa yeelay waa aaladda qof walba uu gacanta ku sito. Fududeynta marin u helistu waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaal badan inay ku wareejiyaan moobiilka halkii ay ka heli lahaayeen kombuyuutar, sidaas darteed helitaanka degelkeenna jawaabta waa muhiim. Liiska kale ee liiska, sida tan oo kale in aan wadaagnay dhowr toddobaad ka hor.
2 Template Sidebar
3 Tilmaamayaasha dhinaca
6 Liiska dhinaceeda
7 Tilmaamaha qalabka wax lagu raaco
8 Saafi CSS Duula
9 Meesha Shaxda Dhinaceeda
Este menu-ku wuxuu bixiyaa taageero ARIA waxaana loo isticmaali karaa labadaba sawirka iyo qaabka muuqaalka. Iyada oo leh naqshad aad u gaar ah, waxay u taagan tahay kaligeed si ay u soo bandhigto animation quruxsan oo Facebook ah, iyo taxane isdaba-joog ah oo soo saara animations dheeraad ah si loogu dhigo dhammaan feerka naqshadeynta websaydhka.
Codad mugdi ah, menu-kan CSS waa hagaagsan yahay midab leh sababtoo ah midabka ogeysiisyadaada iyo sida wacan ee animations-kuagu u fiican yahay. Waxay u adeegsaneysaa hoos-u-dhigista Bootstrap-ku-saleysan, markaa waxaad kuheleysaa heerarka naqshadeynta websaydhka hadda ee gacmahaaga markaad ku dhexjirto websaydhkaaga. Tayo sare shaki la'aan.
Liis menu ah oo ku saleysan tilmaamayaasha la dhigay dhinaca bidix. Waxaan gujin karnaa astaamaha hamburger si loo furo qeybta dhinaca ama kaliya aan gujino mid kasta oo ka mid ah qaybaha. Waxay sidoo kale leedahay ogeysiisyo midabbo leh si menu-kan dhinaceeda ah ee CSS uusan waxba uga maqnayn.
Liiskan dhinacani wuxuu ka kooban yahay kuwa kale midabyo wanaagsan oo midab leh si markaa ay u ballaadhiyaan daqiiqadda aan dul degno qayb kasta oo ka mid ah qaybaheeda. Ku qor liiska HTML iyo CSS si deg deg ah loogu daro websaydhka cusub ee aad u samaynayso macmiil.
Liiska dhinacan ah iyo bar bar ama navbar waxaa lagu sameeyay CSS. Waxaan gujin karnaa astaamaha hamburger si aan u ballaarinno dhammaan xulashooyinka ku yaal baalka sare ee hagaha, ama aan uga tagno tilmaamaha jiirka mid kasta oo ka mid ah qaybaha. Si fiican u dhammeystiran oo lagu kala soocay wehelnimadiisa.
Liiska dhinaca ah ee guduudka ah oo aan aad u kala sooc lahayn inuu ahaado mid taagan iyo menu ballaaran oo qaadanaya in badan oo ka mid ah dhammaan booska u hadhay dhinaca bidix ee boggaaga.
Tilmaamaha qalabka wax lagu raaco
Saafi CSS Duula
Meesha Shaxda Dhinaceeda
Liis menu ah oo la muujiyay oo la soo bandhigay waana taas si toos ah loogu talagalay CSS. Fudud fikradeeda, laakiin natiijo weyn in la helo naqshad qurux badan oo aan faan badan lahayn. Waa mid ka mid ah menusyada dhinacaas ah ee jira laakiin aan jirin. Waxa aad u baahan karto.
Waan kuu daayey adiga liiskan kale CSS maxaa loogu sii hubi heerka ee naqshadeynta websaydhka hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » CSS » 9 menus CSS dhinaceeda ma waayi kartid